Sida farriimaha looga tirtiro koontadaada Messenger | Androidsis
Sida farriimaha looga tirtiro koontadaada ku jirta Messenger
Pablo sanchez | 02/09/2021 15:00 | Khiyaamada Android, Tababarada
Messenger waa mid ka mid ah codsiyada farriimaha ugu caansan ka mid ah dadka isticmaala Android. Codsiga Facebook waa hab wanaagsan oo lagula xiriiro asxaabteena iyo qoyskeena shabakadda bulshada. Intaa waxaa sii dheer, waqti -dhaafku, shaqooyin cusub ayaa lagu daray barnaamijka si loo awoodo in la yeesho wada -sheekeysi wanaagsan, laga bilaabo emojis kala duwan iyo dhejisyo, illaa suurtagalnimada wicitaannada ama wicitaannada fiidiyaha (oo ay ku jiraan wicitaannada kooxeed).
Waxaa jira waqtiyo aad jeceshahay tirtir fariimaha ku jira koontadaada Messenger. Tani waxay ka imaan kartaa sheeko gaar ah oo aad yeelatay ama dhammaantood tirtirtay haddii aad qorsheyneyso inaad joojiso adeegsiga barnaamijkan taleefankaaga Android ama PC -ga. Xaaladaha oo dhan, waxaa jira siyaabo lagu tirtiro farriimaha noocaas ah.
1 Tirtir farriimaha sheekaysiga Messenger
2 Tirtir dhammaan farriimaha Rasuulka
Tirtir farriimaha sheekaysiga Messenger
Tirtiridda farriinta ugu fudud waa marka aan rabno tirtir farriimaha ka imanaya sheekaysiga shaqsi ee abka. Waxa laga yaabaa inay tahay sheeko aan muddo dheer wax dhaqdhaqaaq ahi ka jirin, ama laga yaabo inay la sheekaysato qof go’aamiyay inuu tirtiro akoonkiisa Facebook ama waxaa laga yaabaa inaad adigu rabto inaad tirtirto akoonkooda Facebook oo aad ka tagto si aad u isticmaasho Messenger. Si kastaba xaalku ha ahaadee, tirtiridda farriimaha sheekaysiga shaqsiyeed waa mid aad u fudud waxaana lagu samayn karaa labadaba barnaamijka Android iyo PC -ga.
Haddii aad u isticmaasho dalabka Facebook Messenger ee Android, tirtiridda farriimaha runtii waa mid fudud. Dhowr tallaabo waxaad awoodi doontaa inaad tirtirto sheeko gaar ah (ama dhowr ah) oo aad ku leedahay koontadaada abka. Tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad u tirtirto farriimahaas waa:
Fur barnaamijka Messenger taleefankaaga Android.
Ka hel sheekada ama sheekaysiga aad rabto inaad ka saarto koontadaada arjiga.
Ku riix sheekada.
Liis ayaa ka muuqda shaashadda hoosteeda.
Guji ikhtiyaarka tirtirka ee ku jira menu-ka soo-baxa.
Haddii ay jiraan sheekooyin badan oo aad rabto inaad ka saarto koontadaada, ku celi habsocodyadaas wada sheekaysigaas.
Habsocodku wuxuu qaadanayaa dhowr ilbidhiqsi oo waan ka saarnay wada sheekaysigaas si wanaagsan. Tani waxay u malaynaysaa in sidoo kale faylasha la isku weydaarsaday sheekaysiga la yiri weligoodba waa la tirtiraa. Markaa haddii ay jiraan sawirro ku jira sheekaysiga oo aad rabto inaad keydiso, waa inaad ku soo dejisaa aaladdaada ka hor intaadan tirtirin sheekadaas koontadaada.
Ikhtiyaarka kale ee lagu tirtiro sheekaysiga gaarka ah ee Messenger waa in laga sameeyo kombiyuutarka. Sidaad horeba u ogayd, qaybteeda desktop -ka adeeggan farriinta ayaa lagu daray Facebook. Habsocodku wuxuu aad ugu eg yahay wixii aan ku samaynay Android, sidaa darteed ma soo bandhigayo wax dhib ah marka tan la samaynayo. Tallaabooyinka la raacayo waa:
Ka gal Facebook -ga biraawsarka kombuyuutarkaaga.
Gal akoonkaaga shabakadda bulshada.
Guji astaanta Rasuulka ee midigta sare ee shaashadda.
Sheekaduhu waxay ku furan yihiin liiska hoos-u-dhaca.
Guji ikhtiyaarka dhammaadka ah, kaas oo leh "Wax walba ku arag Messenger."
Dhinaca bidix ee shaashadda waxaad ku arki doontaa sheekaysiga. Soo hel sheekaysiga aad rabto inaad tirtirto.
Guji saddexda ellipsis ee ku xiga wada sheekaysiga.
Liiska soo muuqda, guji Delete chat.
Ku celi hawshan sheekooyin kale oo aad rabto inaad sidoo kale tirtirto.
Sida habkan ku jira Android, haddii aan tirtirno sheekaysiga files multimedia waa la tirtiray waxaan ku leenahay. Sidaa darteed, haddii ay jiraan sawirro ama fiidyowyo aad rabto inaad ku haysato kombiyuutarkaaga, waa inaad soo dejisaa ka hor intaan sheekadan la tirtirin, maxaa yeelay haddii kale weligaa waad waayi doontaa. Waa inaad sidaas oo kale ku sameysaa sheekaysiga kale ee aad qorsheyneyso inaad ka tirtirto koontadaada Messenger.
Tirtir dhammaan farriimaha Rasuulka
Doorashada labaad ee aan helno waa tan tirtir dhammaan farriimaha aan ku hayno Facebook Messenger. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad joojiso adeegsiga arjigan, markaa ma doonaysid in raadadka koontadaada ama taariikhdaada ay ku hadhaan. Xaaladaha noocaan ah, appku wuxuu noo oggolaanayaa inaan tirtirno dhammaan farriimaha aan ku hayno koontada. Nidaamkani ma aha mid adag oo mar labaad waxaa lagu samayn karaa dhammaan noocyada codsiga.
Ma jirto si loo tirtiro dhammaan farriimaha hal badhan oo la riixo. Taas micnaheedu waa in aan wada -hadal kasta si gaar ah ugu tirtirnaa koontadayada, si la mid ah sidii aan ku samaynay qeybihii hore. Haddii aad ku leedahay tiro badan oo sheekeysi ah koontadaada Messenger, howshu waxay qaadan doontaa waqti dheer, marka waa inaad adigu dulqaadataa samir oo aad tirtirtaa wada -hadal kasta oo aad ku leedahay arjiga. Intaa waxaa dheer, maahan inaan iska ilowno sheekooyinkaas ku jira Archived, oo ay tahay inaan sidoo kale ka tirtirno koontadayada.
Macno malahan haddii nidaamkan lagu sameeyo dalabka Android ama barowsarka ku jira PC -ga. Natiijadu waxay noqon doontaa isku mid labada xaaladoodba, markaa waa arrin doorbidis ah. Xaaladayda, waxaan howshan ku fuliyay nooca desktop -ka, maxaa yeelay waxay sidaas u leedahay marin aad u fudud oo ku saabsan sheekooyinka kaydsan ee barnaamijka, oo ka duwan nooca Android. Tallaabooyinka ay tahay inaan raacno kiiskan, sidaan hore u soo sheegnay, waa:
Dhinaca bidix ee shaashadda waxaad ku arki doontaa sheekaysiga
Guji saddexda ellipsis dhinaca midig ee sheekaysiga.
Ku celi hawshan sheekaysiga intiisa kale.
Dusha sare, oo ku xigta Chats, guji saddexda ellipsis.
Tag Sheekooyinka Kaydsan.
Ku celi habka si aad uga saarto sheekadan koontadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida farriimaha looga tirtiro koontadaada ku jirta Messenger
Isbaanishka iyo koodhadhka taleefannada caalamiga ah